Rolled Ọla kọpa foils, Electrolytic Ọla kọpa foil, eriri igwe mpempe akwụkwọ - Civen
Ọkachamara gị n'ichepụta ihe igwe na ngwaahịa ndị yiri ya.
Ngwa igwe dị elu ma kwụsie ike iji mee ka ngwaahịa gị bụrụ asọmpi.
Mgbe niile, anyị na -edobe isi anyị n'elu ma na -emegharị onwe anyị.
Otu esi akpọtụrụ?
Ụlọ ọrụ ndị ama ama n'ụwa niile nabatara ngwaahịa anyị.
Na -ekpo ọkụ!
Ahịa na -eduzi ya, nke ịdị mma na -ekwe nkwa ya.
Gbanwee onwe anyị ma chụsoo ọkaibe!
Agaghị enye ọrụ taa echi
Imekọ ihe ọnụ siri ike, imepụta ihe ọhụrụ na ihe ịma aka maka ọdịnihu.
N'ime afọ 20 nke ahụmịhe
CIVEN METAL guzobere na 1998. Anyị na -arụ ọrụ n'ịzụlite, imepụta na ikesa ihe igwe.
Ngwa dị elu
Site na ụlọ ọrụ ahụike na-emepe emepe, anyị na-akwadebe onwe anyị akụrụngwa nrụpụta dị elu na ngwa ịlele teknụzụ dị elu. Anyị na -emeziwanye usoro anyị na akụrụngwa anyị iji mee ka ihu anyị dị na ụlọ ọrụ a.
Ezigbo R&D ike
Ngalaba R&D anyị na -arụ ọrụ na mmepe nke ihe igwe ọhụrụ iji bulie ike nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ngwaahịa niile anyị na -ere bụ asambodo
A na -etinye olu ire ere
Biko kpọtụrụ anyị ugbu a
Anyị na -arụ ọrụ n'ịzụlite
na -emepụta ma na -ekesa ihe igwe.
Biko hapụ anyị, anyị ga -akpọtụrụ n'ime awa 24.
Ọgọst 16, 2021
Kedu ihe bụ electrolytic (ED) foil ọla kọpa na kedu ka esi eme ya?
A na -ekwukarị na foil ọla kọpa Electrolytic, foil metal ahaziri, usoro ya na -emepụta dị ka nke a: ịgbari: a na -etinye mpempe ọla kọpa electrolytic n'ime ngwọta sọlfọ acid iji mepụta sọlfọ ọla kọpa ...
Kedu ihe dị iche n'etiti foil ọla kọpa (ED) na foil ọla kọpa (RA)
Njirimara usoro ITEM ED RA process Usoro nrụpụta structure Ọdịdị kristal range oke ọkpụrụkpụ width oke obosara → iwe dịnụ treatment ọgwụgwọ dị elu usoro kemịka ihe mkpuchi ụlọ Ọdịdị kọlụm 6μm ~ 140μm 1340mm (n'ozuzu 1290mm) siri ike okpukpu abụọ na -egbu maramara / otu akwa / eme ...
Ọgọst 13, 2021
Usoro nrụpụta ọla kọpa na ụlọ ọrụ
N'inwe nnukwu mmasị n'ọtụtụ ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na -ele ọla kọpa anya dị ka ihe na -agbanwe agbanwe. A na -emepụta foils ọla site na usoro nrụpụta akọwapụtara nke ọma n'ime igwe igwe foil nke gụnyere ma mpịakọta na -ekpo ọkụ na oyi. Tinyere aluminom, ọla kọpa na -agbasa ebe niile ...
Ọnwa Iri 08, 2021
Civen na -akpọ gị oku ka ị bịa ihe ngosi （PCIM Europe2019）
Banyere PCIM Europe2019 Ụlọ ọrụ eletrọnịk ike na -ezukọ na Nuremberg kemgbe 1979. Ihe ngosi na ogbako a bụ nnukwu ikpo okwu mba ụwa na -egosi ngwaahịa, isiokwu na usoro ọkụ eletriki na ngwa. Ebe i nwere ike ịhụ o ...
Covid-19 nwere ike ịlanarị na mpaghara ọla kọpa?
Ọla kọpa bụ ihe kacha egbu ihe na -egbu nje maka elu. Ruo ọtụtụ puku afọ, ogologo oge tupu ha amata banyere nje ma ọ bụ nje, ndị mmadụ amatala ike ọgwụ mgbochi ọla kọpa. Edere ọla kọpa mbụ ka ọ bụrụ nje ...
Kedu ihe akpọrepu (RA) foil ọla kọpa na kedụ ka esi eme ya?
Akpọrọ foil ọla kọpa, foil metal ahaziri ahaziri, arụpụtara ma mepụta ya site na usoro mpịakọta anụ ahụ, usoro imepụta ya dị ka ndị a: ntinye: A na -eburu akụrụngwa ahụ n'ime ọkụ na -agbaze t ...
Onye Tụkwasiri Anyị Obi